Keriako Tobiko oo racfaan ka qaatay sii deyntii Seneter-ka Machakos – The Voice of Northeastern Kenya
Keriako Tobiko oo racfaan ka qaatay sii deyntii Seneter-ka Machakos
Agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda guud ee dalka Keriako Tobiko ayaa racfaan ka qaatay go’aankii ay dhawaan maxkamadda ku sii deysay Seneterka Maamul goboleedka Machakos Johnstone Muthama oo loo heystay eedeymo la xiriira jeedinta hadallo nacayb abuuraya.
Mr Tobiko ayaa ku doodaya in xukunkii ay maxkamadda ku sii deysay siyaasigaasi uusan ahayn mid waafaqsan dastuurka dalka, gaar ahaan qodobadiisa 23-aad iyo 165-aad.
Dacwad soo oogaha guud ee dalka ayaa sidoo kala qaba in garsooraha maxkamadda uusan ku saxneyn in uu go’aan kama dambeys ah ka qaato kiiskaas, iyadoo ay wali jiraan cadeymo ku filan oo lagu sii amba qaadi karo.
Senetor Muthama ayaa maxkamadda laga fasaxay waxaana daaqada laga tuuray dacwaddii ka dhanka ahayd oo goor sii horeysay xabsiga loogu taxaabay taas awgeed.
Hase ahaatee Keriako Tobiko ayaa hadda doonaya in dhinac la iska dhigo go’aankaasi isla markaana dib loo furo dacwadda ka dhanka ah Mr Muthama oo ka tirsan hogaamiyeyaasha isbahaysiga mucaaradka ah ee CORD.
Xaakinka maxkamadda racfaanka Luka kimaru ayaa codsiga racfaanka ah ee uu Tobiko gudbiyay u aqoonsaday in uu yahay mid deg deg ah oo si dhaqso ah loot ix galin doono.
← Markab shidaal siday oo laga afduubtay Malaysia
Ninkii goor hore tooreeyay haweeney ajaanib ah oo dalka kusugneed oo maxkamada la soo taagay →